Turkey oo ku gacan sayrtay arrin uu soo jeediyey Macron
Turkey ayaa ku gacan sayrtay baaq ka yimid madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo ahaa in dhammaan quwadaha shisheeye ay ciidamadooda kala baxaan Libya.
Dalka Libya ayaa waxaa ka socday dagaal sokeeye tan iyo markii xukunka laga tuuray kaligii taliye Mucamar Qadafi, oo ku baxay kacdoonkii 2011.
Macron ayaa ka sheegay shirka caalamiga ah ee Libya ee Jimcihii ka dhacay Paris “In Russia iyo Turkey ay calooshood u shaqeystayaashooda kala baxaan Libya ayada oo aan dib loo dhigin.”
“Libya waxay u baahan tahay in laga taageero hannaankeeda siyaasadda, doorashooyinka iyo arrimaha dhaqaale,” ayuu yiri Kalin oo tixraacaya doorashooyinka madaxweyne ee madaxda caalamka ay doonayaan inay dhacaan 24-ka December.
France ayaa ayada xitaa lagu eedeeyaa inay taageero Khalifa Haftar, balse waa ay iska fogeysay.
Turkey ayaa Paris u dirtay wafdi heerkiisu hooseeyo, taasi oo astaan u ah sida aysan ugu faraxsaneyn mowqifka siyaasadda arrimaha dibdda Macron.
“Joogitaankeena militari ee halkaas waa inaan caawino tababarka ciidamada Libya,” ayuu yiri.